Madax goboleedyada oo jawaab kasoo saaraya warkii kasoo baxay Aqalka Sare - Caasimada Online
Home Warar Madax goboleedyada oo jawaab kasoo saaraya warkii kasoo baxay Aqalka Sare
Madax goboleedyada oo jawaab kasoo saaraya warkii kasoo baxay Aqalka Sare
Muqdisho (Caasimada Online) – Maamul Goboleedka Jubaland ayaa soo dhaweeyay go’aankii ka soo baxay Golaha aqalka sare ee ahaa isku daygooda ay ku doonayaan in xal looga gaaro khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad Goboleedyada.
Wasiiru dowlaha Madaxtooyada Maamulka Jubaland, Xirsi Jaamac ayaa sheegay in Golaha aqalka sare ay dadaaleen laakiin sida uu sheegay laga tagay qodobo muhiim ah oo ay ka mid tahay cadaaladda,in dowladda dhexe ay fuliso wixii horay loogu heshiiyay iyo qodobo kale.
Xirsi Jaamac ayaa sheegay in dowlad Goboleedyada ay dhawaan War-safaxaafadeed ka soo saari doonaan Qodobada ay soo saareen aqalka sare ee ay kaga hadleen khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad Goboleedyada.
Golaha aqalka sare ee dalka ayaa shalay soo saaray qodobo ka kooban 8, oo ay ku sheegeen in ay yihiin tabashada dowlad Goboleedyada.
Guddoomiyihii Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyada waxaa uu ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan oo xilkaas iska casilay,waxaa ku xigeen u ah Madaxweynaha Galmudug oo la filayo in War-saxaafadeedkaasi uu ka soo boxo.